Izinwele ezimfishane ezinhlangothini futhi zinde phezulu kwabesilisa | Amadoda aSitayela
Izinwele zabesilisa: Zifushane ezinhlangothini futhi zinde phezulu
UMiguel Serrano | | Ukunakekelwa komuntu siqu, Izitayela zezinwele
Akukho ukugunda izinwele okufushane okukodwa ezinhlangothini futhi kubude obuphezulu. Kunezinwele ezahlukahlukene ezisebenzisa lo mbono ochaziwe, onethezekile nowesilisa..
Lokhu okulandelayo izinketho okufanele uzicabangele Uma ufuna ukucacisa ngesikhathi esizayo lapho ucela umgundi wakho okuthile okufushane ezinhlangothini futhi ubude phezulu.
1 Izinwele zezinwele
1.1 Kwenziwe kanjani?
1.2 Izinketho zezinwele
2 Inkantolo yezempi
2.1 Kwenziwe kanjani?
3.1 Kwenziwe kanjani?
3.2 Izinketho zezinwele
Yisinwele esifushane esithandwa kakhulu ezinhlangothini futhi side ngaphezulu kwakho konke. Futhi akumangazi, ngoba izinzuzo zayo azimbalwa.
Ngokuvamile, ukugunda izinwele kuphelile ngokusika izinhlangothi kanye ne-nape short. Kusukela ethanjeni le-occipital, zonke ezinye izinwele ziya ziba zinde njengoba sikhuphuka ugebhezi. Umehluko phakathi kwezindawo ezahlukahlukene zokusika kufanele ubushelelezi. Kungenziwa ngazo zombili izikele kanye nezinqamu zezinwele.
Isondlo kufanele senziwe njalo emavikini ama-2-4.
Uma ubheja kulokhu kugunda izinwele, unezinketho eziningi lapho uhlanganisa okuphezulu:
Ngokwemvelo kuyinzuzo enkulu yokugunda izinwele okuphelile. Ngale ndlela, kuyindlela enhle kakhulu uma, ngenxa yomsebenzi wakho noma okuncamelayo komuntu siqu, udinga izinwele zakho ukuthi zingadonseli ukunakwa okungaphezu kwalokho okudingekayo.
Akunandaba ukuthi ukubulawa komgundi akunasici. Uma ukugunda izinwele kungahambi kahle nokubukeka kobuso bakho, akukho okumele ukwenze. Ngalo mqondo, ukuphela kuyindlela yokubheja ephephile, ngoba isebenza kahle kuwo wonke amadoda.
Inokuguquguquka okukhulu. Ungayenza ngokwezifiso cishe ngendlela ofuna ngayo, kusuka kubude (ingagqokwa zombili zifushane kakhulu futhi zide) kuya kwisitayela, ngokuphakama kwe-gradient.
Kunabantu abaningi abangafuni ukunikela umzuzwana ngaphezulu kokudingekile ngokuqinile ekhanda labo, ikakhulukazi ekuseni. I-Gradient ukugunda izinwele okuhle kulokhu ngoba kuthatha isikhathi esincane ukuwasha, ukomise nokuyilolonga ibe yifomu oyifunayo.
Inkantolo yezempi ingabhekisa ezinkantolo eziningana. Lapha sichaza leyo mhlawumbe ekhomba kakhulu umhlaba wezempi: i-ultrashort.
Le ndlela yokugunda izinwele emifushane ezinhlangothini futhi ende ngaphezulu iyi- iphuzu eliphakathi phakathi kwama-mohikans nekhanda eligundiwe. Isinqophi sezinwele sidluliswa ngenombolo ephansi kakhulu (imvamisa kungu-0-0.5) cishe lonke ikhanda.
Ingxenye encane kuphela yengxenye engenhla eshiywe ingasikiwe. Le ngxenye ishiywe yinde kancane kunaleyo esele, yize kufanele futhi isikwe ibe mfushane kakhulu. Ungaguqula i-clipper phakathi kuka-1 no-5 kuya ngokuncamelayo okuthandayo.
I-gradient iyakhethwa, kepha okungaphikisani nokuphakama kwezinhlangothi. Ukuthola ukwakheka kwayo okuyisici umugqa wamathempeli udinga ukukhuphuka kakhulu, ehlukanisa izindawo ezimbili zokusika.
Isondlo kufanele senziwe njalo emavikini ama-2-3.
Ukusikwa kwamasosha konga isikhathi esiningi phambi kwesibuko, ngoba awudingi ikama noma ama-fixers. Kuvuka embhedeni futhi ngokushesha kulungele ukuphuma ngaphandle. Ngakho-ke kunjalo isitayela sezinwele esisebenzayo.
Yizinwele ezimfishane ezinhlangothini futhi zinde phezulu ezigcizelela kakhulu izici zobuso. Uma ufuna umphumela wesilisa nobunzima, ngokuqinisekile kuyindlela ongayikhumbula..
Imfashini kakhulu. Eminyakeni yamuva nje, ibiphethwe ngabanye babalingisi abapholile kunabo bonke kwifilimu nakuthelevishini, kufaka phakathi i-'Peaky Blinders 'noma uJon Hamm kwifilimu yesenzo ethi' Baby Driver '.
Njengakwezinye ezimbili ezedlule, uqala ngokusika i-nape nezinhlangothi kube kufushane noma kufushane kakhulu. Noma kunjalo, lapha kufunwa ukuthi kukhona umehluko omkhulu phakathi kwezinhlangothi naphezulu. Ngenxa yalokhu, ingxenye ephezulu ishiywe iphakathi noma yinde.
Njengokunqunywa kwezempi, ukuthi ukufaka i-gradient noma cha kuncike kokuncamelayo kwakho. Cabanga ngakho uma ufuna ukufaka ukuthinta okuthe xaxa kunwele yakho engaphansi.
Isondlo kufanele senziwe njalo emavikini ama-2-5.
I-undercut ivame ukuhlanganiswa emuva. Ingxenye engaphambili ivame ukunikezwa ivolumu, yize ingadingekile. Futhi ungakhetha ezinye izitayela, ezinjengalezi ezilandelayo:
Ukunqunywa kwezinwele okungaphansi isebenza kahle ngokumangalisayo ngezintshebe. Uma usukhulile izinwele zobuso, le kwekhanda ingenye yezesekeli ezinhle kakhulu ongazinikeza.
Ukwenza i-undercut kulula kakhuluikakhulukazi okokuqala, njengoba kaningi awudingi ukuthinta phezulu kakhulu. Kwanele ukudlulisa isiqeshana sezinwele ezinhlangothini kanye nape yentamo kunombolo ekhethiwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Izitayela zezinwele » Izinwele zabesilisa: Zifushane ezinhlangothini futhi zinde phezulu